China Hutano Yakaomeswa Marigold Ruva Tei Kugadzira uye Fekitori | Bestop
Organic Herbal Mushonga
Varume Hutano Kuchengetedza
Runako Ruva Tea
GoHerbal Vatengi 'Kuongorora
Mbeu YeAsiaatic Plantain Chinese Herbal Mushonga Ndiani ...
Chinyakare Chinese Mishonga Yezvinhu Herba Cistan ...
Chinese Herbal Mishonga Wholesale Alpinia Officinarum
Tsika dzeChinese Herbal Mushonga Hemp Mbeu
Chinyakare Chinese Mushonga Wezvinhu Membrane Ye ...
Yetsika Chinese Mushonga Loquat Shizha
Mishonga Yembiriso Chinyakare Chinese Herbal Mushonga
Wholesale Yetsika Chinese Mushonga Maca
Nyowani Yekukohwa Yakasva Kaffir Lime Peel
Herbal Tea Lily Zvinhu MuStock
Ruva Tea Rose Bud
Hutano Hwakaomeswa Marigold Ruva Tea
Wholesale Ruva Tea Kanganwa-Me-Kwete
Burdock Midzi Ruva Tea
Ruva Tea Peony Zvinhu MuStock
Chinese zita: jin zhan hua
Chirungu Zita: pot marigold
ChiLatin Zita: Calendula officinalisL.
Shandisa Chikamu: ruva
Tsanangudzo: Yese, Cheka Chidimbu, Bio Upfu, Bvisa Poda
Basa repamusoro: Kudzora qi, kubvisa kushushikana, kugadzirisa phlegm, kubvisa nyota, kudya uye kufunga
Kushanda: Mushonga, Hutano Kuchengeta chikafu, Waini, nezvimwe.
Kuchengeta: Nzvimbo inotonhorera uye yakaoma.
Apex 1kg / bhegi, 20kg / atorwa, sezvo paminiti vatengi chikumbiro
Calendula officinalis L., mushonga unopa biennial weCompositae, une mvere. Mashizha anochinja, akareba. Maruva ari yero kana orenji yero. Nguva yekutumbuka inotangira munaKubvumbi kusvika Gunyana uye nguva yekumera ichibva munaJune kusvika Gumiguru. Kufanana nekukura mune yakapfava, inotonhorera mamiriro ekunze, kutya kupisa, kutonhora. Inowanikwa kumaodzanyemba kweEurope uye pamhenderekedzo yeMediterranean. Calendula ine mavitamini akapfuma, kunyanya vhitamini A uye vhitamini C, ayo anogona kudzivirira pigmentation, kunatsiridza ganda kubwinya uye kuomarara, kunonoka kukwegura, uye kudzivisa kutandara kweganda nekuunyana  Zvinenge zvikamu zvese zvinogona kudyiwa; Iwo maruva ane basa rerunako. Iwo maruva ane carotenoids, lycopene, chrysanthin, mafuta asina kugadzikana, resini, myxoid, malic acid, nezvimwewo Mudzi une chinhu chinovava uye kaempferol; Mbeu dzine glycerides, waxy alcohol uye alkaloids. Isa iri mushambu kujekesa bvudzi rako. VaIjipita vekare vaitenda kuti marigold anogona kunonoka kuchembera, nepo maIndia vaichiremekedza seruva dzvene. Mumazera epakati, marigold aishandiswa kurapa vakakuvadzwa uye kurwisa denda uye kufa kwevatema.
Marigold ndeimwe yemaruva anonyanya kufarirwa mumaruva ekutanga magadheni nemaguta. KuMadokero ekare, inogona kushandiswa semushonga kana dhayi, zvakare seyekuzora mbishi zvinhu kana chikafu. Mashizha awo uye peturu anogona kudyiwa, saka anogona kushandiswa sekushongedza kwemidziyo.
Antibacterial, anti-inflammatory, hypolipidemic, immunostimulatory uye sedative mhedzisiro
Calendula michero yakafuma muvhitamini A, iyo inogona kudzivirira pigmentation, kuwedzera kubwinya kweganda uye kusimba, kunonoka kukwegura, uye kudzivirira kuzorora kweganda nekuunyana. Inogona zvakare kudzivirira dzakabudirira zvirwere, zvakaita sevascular zvirwere uye cancer, gadzirisa qi uye kubvisa chikosoro, simbisa mudumbu, kubvisa phlegm, kudzivirira asima uye bronchitis. Kumquat zvakare ine vhitamini P, inova yakakosha zvinovaka muviri kuchengetedza hutano hwevascular. Inogona kusimbisa kusimba kwema microvessels, uye inogona kushandiswa sechikafu chekubatsira chekuyamwisa chehypertension, arteriosclerosis uye chirwere chemwoyo.
Calendula inokodzera kune imwechete bubble, kana ne green green. Bira nepasipuni yemakesi akaomeswa eCalendula uye simmer kwemaminetsi mashanu kusvika ku5. Iyo tii yegoridhe inoisa pane inoyerera peturu peturu uye ine kunhuhwirira kwakanaka. Inotapira inotapira uye inovava zvishoma, uye inogona kurungwa neuchi. Paunenge uine kutonhora, kunwa Calendula tii kunobatsira kudzikisa kupisa, kupisa uye kudzikisa moto. Iyo zvakare ine mhedzisiro yekubvisa spasm uye kukurudzira kugaya, iyo inokodzera kwazvo kune varwere vane peptic ulcer. Uye zvakare, inogona kusimudzira kutenderera kweropa. Inogona zvakare kudzikisira kudhakwa, saka zvinobatsirawo kuchiropa. Asi vakadzi vane nhumbu havafanirwe kunwa marigold tii.
Usage uye chipimo chemushonga: 1.8-4.5g
Usage uye chipimo chemushonga
Oral manejimendi: decoction, 10-20g; Bika kirimu, shenesa waini kana mupiritsi, hupfu. Kushandisa kwekunze: huwandu hwakakodzera, decoct, kuwacha, kukuya, kusasa kana kuparadzira.
Polygonum multiflorum inokodzera ropa rinovaka muviri uye Yin; Izvo zvakakodzera kushandisa mbishi Polygonum multiflorum yekunyorovesa ura uye kusvibisa, kudzinga mhepo, kubata malaria uye kudzikisira.
Kuunganidza uye kugadzirisa
Chera mukuvhuvhu, bvisa iyo ine fibrous midzi, geza, woma kusvikira nyoro, kanya uchidzokororazve, mweya wakaoma kusvika pasisina yakaoma core, uye kuoma; kana mushure mekutsvaira, kanya kusvikira wajeka, uye woma
Bvisa tsvina, geza, nyorovesa, cheka kuita zvidimbu zvakakora kana zvikamu, uye woma.
Chengetera munzvimbo inemhepo uye yakaoma yekudzivirira chakuvhe uye chipfukuto.
Pashure: Wholesale Ruva Tea Kanganwa-Me-Kwete
Zvadaro: Ruva Tea Rose Bud
Butterfly Pea Ruva Tea
Yakaomeswa Marigold Ruva Tea
Herbal Tea Maruva
Ruva Ruva Tea
Isu tiri piyona wekusimbisa maChinese mahebhu anobata esp yekutengesa echinyakare mushonga wemakwenzi kune pasirese pasirese.
5 / F, Nyowani Nyika, 92 Qinghe East Road, Qinghe Street, Fuyang Guta, Anhui Province, China
Welcome kushanyira boka redu
Yetsika Chinese Mishonga Scorpion
Zvinoshamisa mhedzisiro yeTangerine Peel